कस्तो छ राष्ट्रपति ट्रम्पको स्वास्थ्य अवस्था? ७४ वर्षको उमेर र ककटेल खोपको असर के होला?:: Naya Nepal
कस्तो छ राष्ट्रपति ट्रम्पको स्वास्थ्य अवस्था? ७४ वर्षको उमेर र ककटेल खोपको असर के होला?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो अवस्था ठीक रहेको र केही दिनमा वास्तविक परीक्षण हुने बताएका छन्। ट्विटरमा भिडियो पोस्ट गर्दै उनले उनीमाथि उठेका आशंकाहरुको जवाफ दिएका हुन्। उनको स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर धेरैखाले अड्कलबाजी सार्वजनिक भएका थिए।
ट्रम्पको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले उनको अवस्था ठीक रहेको जनाएका छन् जबकि ह्वाइट हाउसका चिफ अफ स्टाफले उनको स्वास्थ्यमाथि गहिरो चिन्ता प्रकट गरेका थिए।
आज ट्रम्प अस्पतालमा दोस्रो रात बिताउँदैछन्।
चार मिनेट लामो भिडियोमा राष्ट्रपति ट्रम्पले वाल्टर रीड नेसनल मिलिट्री मेडिकल कलेजका डक्टर तथा नर्सलाई धन्यवाद दिए। वासिङ्टन डीसीको नजिकैको यही अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको छ।
‘असहज महसुस भएपछि म यहाँ आएँ। अहिले सबै ठीक छ,’ ट्रम्पले भने, ‘मलाई लाग्छ अबका केही दिनहरुमा वास्तविक परीक्षण हुनेछ। आगामी दिनहरुमा के हुन्छ म त्यसको प्रतीक्षामा छु।’
उनले आफू चुनावी अभियानमा सरिक हुन चाहेको समेत प्रस्ट्याएका छन्। नोभेम्बर ३ मा हुँदै गरेको अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ट्रम्पले डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार जोय बिडेनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।
ट्रम्पले हिजोमात्र आफूमा कोभिड १९ को संक्रमण भएको ट्विटबाटै जानकारी गराएका थिए। यसअघि उनी चुनावी अभियानमा सक्रिय थिए भने हालै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पनि नियुक्त गर्न उनले भ्याए। उनको दुई चुनावी बहस बाँकी नै छ। कोभिड १९ संग संघर्षरत उनले अब बाँकी बहसमा सहभागिता जनाउन सक्छन् या सक्दैनन् अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन।
ट्रम्पको अवस्था कस्तो?
हिजो साँझमात्रै डाक्टर सेन कोनलेले ट्रम्पलाई अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था नरहेको र पछिल्लो २४ घन्टामा ज्वरोसमेत नदेखिएको जनाएका थिए।
ह्वाइट हाउसका अनुसार केही दिन ट्रम्प वाल्टर रीडमा नै रहने अपेक्षा गरिएको छ। डाक्टर कोनेलले ट्रम्पको अवस्थाप्रति आफू पूरै आशावादी रहेको बताएका छन्। यद्यपि, उनलाई डिस्चार्जका लागि समय भने तोकेनन्।
ह्वाइट हाउसका चिफ अफ स्टाफ मार्क मिडोसले ट्रम्पको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चासो प्रकट गर्दै उनी अझै प्रस्ट रुपमा निरोगी भइनसकेको जनाएका छन्। उनले अबका ४८ घन्टा ट्रम्पका लागि संवेदनशील रहने बताएका थिए।
राष्ट्रपति ट्रम्प ७४ वर्षका छन्। यसकारण पनि उनी जोखिम उमेर समूहमा पर्छन्। त्यतिमात्र होइन उनीमाथि परीक्षणमा नै रहेको ककटेल खोप दिइएको थियो। यसैलाई लिएर धेरैले प्रश्न गरेका छन्।
ट्रम्पलाई हिजो हेलिकप्टरमा राखेर अस्पताल पुर्‍याइएको थियो।
बलात्कारको डरलाग्दो श्रृंखला
लहान, १८ असोज । साथीसँग खेलिरहेकी पाँच वर्षीया बालिकालाई छिमेकी एक किशोरले बोलाए । चिनजानकै दाइले माया गरेर बोलाएपछि ती बालिका चकलेट पाइने आशा राखेर गइन् ।
तर उनलाई के थाहा १७ वर्षीय छिमेकी दाइले आफूलाई बलात्कार गर्लान् भन्ने । तिनै छिमेकी दाइ उनका लागि राक्षस बने । आमा खेतमा गएका बेला अबोध बालिका आफ्नै घरमा बलात्कृत भइन् ।
यो घटना साउन ४ गते दिउँसो सिरहा नगरपालिका-१९ सन्हैठाको सोहर्वा टोलमा भएको हो । खेतबाट आएकी आमा घरभित्रै छोरीलाई रक्ताम्य देखेपछि आत्तिइन् । छोरी पीडाले सहन नसकेर छटपटाइरहेकी थिइन् ।
उनी हतारहतार छोरीलाई लिएर जिल्ला अस्पताल सिरहा पुगिन् । त्यहाँ डाक्टर नभेटेपछि उनी लहान अस्पताल गइन् । प्रारम्भिक उपचारकै क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका प्रहरीसमक्ष पीडित बालिकाले घटनाको बयान गरिन् ।
लहान अस्पतालमा पर्याप्त उपचार सम्भव नभएपछि बालिकालाई बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लगियो । धरानमा करिब दुई साता उपचारपछि बालिका घर त फर्किन् तर पीडा कम भएन ।
नयाँ मान्छे देख्दा डराउने, छिनछिनमा मुर्छा पर्ने, गुप्तांग दुख्नेलगायत समस्या निको नभएपछि परिवारले फेरि उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल सिरहा लगे। त्यहाँ करिब एक साता उपचार गरेपछि पनि बालिकाको स्वास्थ्यमा सुधार आएन । उनलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं लग्नुपर्ने भयो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिवारका लागि यो सम्भव थिएन। परिवारले उनलाई घरमै राख्योे ।
घटना प्रहरीमा दर्ता भए पनि आरोपित पक्राउ परेका थिएनन् । पीडित परिवारलाई घटना मिलाउन दबाब आउन थाल्यो । उपचारको सम्पूणर् बन्दोबस्ती गर्ने र थप रकम दिने भनेर पीडितलाई बयान फेर्न दाबाब दिइयो । स्थानीय दिलीप सहनीले एम्बुलेन्स खर्चदेखि बाटो खर्चसम्मको बन्दोबस्त मिलाएर भदौ १५ गते थप उपचारका लागि ती बालिकालाई काठमाडौं पठाए । सहनी भन्छन्, ‘बालिकाको घाउ निको हुँदै गए पनि डराउने, मुर्छा पर्ने समस्या भने कम भएको छैन ।’
ओरेक नेपाल सिरहाकी देवकुमारी महरा भन्छिन्, ‘ओरेक नेपाल केन्द्रीय कार्यालयले पीडित बालिकाको सम्पूणर् उपचारखर्च बेहोर्दैछ । अहिले सेफ हाउसमा सुरक्षित बालिकाको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आइरहेको छ । तर मानसिक स्वास्थ्यमा परेको गम्भीर असर अझै हटेको छैन ।’ आरोपित किशोरको घरको ढोकामा घटना भएदेखि नै ताला झुन्डिएको छ । आरोपितसहित परिवारका सबै सदस्य फरार छन् ।
असोज २ गते कर्जन्हा नगरपालिका-३ मा १९ वर्षीया युवती चिनजानकै पुरुषबाट बलात्कृत भइन् । रातमा सबै सुतिरहेको मौकामा घरमा पसेर छिमेककै २५ वर्षीय युवकले बलात्कार गरे । किशोरी चिच्याउन थालेपछि मुखमा कपडा कोचेर राक्षसी व्यवहार गरियो। आरोपित फरार छन् । पीडित पक्षले इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयामा जाहेरी दर्ता गराएको छ ।
डिएसपी सन्तुलाल जयसवालका अनुसार प्रहरी अनुसन्धान र पीडितको बयानका आधारमा घटना यथार्थ हो । ‘आरोपित फरार छन्,’ डिएसपी जयसवालले भने, ‘खोजतलास जारी छ ।’ विवाहित ती युवती माइतमा बसेका बेला बलात्कृत भएकी हुन् । पीडक पक्षले किशोरीका माइती पक्षलाई प्रभावमा पारेर बयान बदल्न दबाब दिइरहेको स्थानीय बताउँछन् ।
भदौ १ गते धनुषाधाम-९ सय बिघास्थित दिदीको घरमा बिहे भोज खाएर सबैला नगरपालिका-१२ रघुनाथपुरस्थित घर फर्किरहेकी किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरियो । आठ जना युवकले आफूलाई बन्धक बनाएको र त्यसमध्ये चारजनाले बलात्कार गरेको बयान किशोरीले प्रहरीमा दिएकी छन् ।
बालात्कारीले भिडियो समेत खिचेको र कसैलाई बताए फेसबुकमा सार्वजनिक गरिदिने धम्कीसमेत दिएको पीडितले बताएकी छन् । प्रहरीले घटनामा संलग्न दुईजनालाई पक्राउ गरे पनि बाँकी फरार छन् । पीडकका अभिभावकले पीडितलाई बयान फेर्न निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।
यस्तै असोज १३ गते राति करिब ८ बजे महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका-९ बस्ने ३५ वर्षीया महिला वडासचिवबाटै बलात्कृत भइन् । हटियाबाट घर फर्किरहेकी ती महिला मुसहरी टोलकै सडकमा बलात्कृत भएकी थिइन् । घटनाबारे प्रहरीमा जाहेरी नगर्न दबाबा आए पनि ती पीडितले मानिनन् ।
राति नै प्रहरीलाई घटनाबारे जानकारी गराउँदै उनी निसाफका लागि अघि बढिन् । प्रहरीले जाहेरीका आधारमा वडासचिव सोही गाउँका ५१ वर्षीय मिथलेश यादवलाई पक्राउ गर्‍यो । प्रहरीले महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गराएर अनुसन्धान थालेको छ ।
पीडकविरुद्ध जबरजस्ती करणी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी १० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत महोत्तरीबाट म्याद लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी निरीक्षक केदार बस्नेतले बताए ।
बलात्कारका परेका उल्लिखित सबै दलित समुदायका हुन् । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका उनीहरुको राजनीतिक र सामाजिक हैसियत पनि कमजोर नै छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा कमजोर यी पीडितले निसाफका लागि कानुनी पाइला अघि बढाए पनि उनीहरूलाई बयान फेर्न र समाजमै मिल्न दबाब दिने क्रम भने रोकिएको छैन ।
यी पीडितलाई परिवार र समाजमा पुनस्र्थापित हुन सजिलो छैन । समाजले पीडितलाई नै दोषी देख्छ । एक दशकयता बलात्कार पीडितका लागि काम गरिरहेकी महिला अधिकारकर्मी देवकुमारी महराका अनुसार बलात्कृत महिलाले चाहेर पनि पीडा भुल्न सक्दैनन् ।
प्रहरी र वकिललाई घटनाको बयान दिनुपर्छ। न्यायाधीशलाई त्यसबारे जवाफ दिनुपर्छ । विपक्षी वकिलले सोध्ने ‘असंवेदनशील’ प्रश्नको जवाफ दिँदा पीडितले पटकपटक बलात्कृत भएको महसुस गर्नुपर्छ ।
‘मनोपरामर्श वा उपचारपछि पनि पीडितमा घटनाको छाप कुनै न कुनै रूपमा बाँकी नै रहन्छ,’ लैंगिक विज्ञ सुनीलकुमार साह भन्छन्, ‘परिवार, आफन्त र समाजको मायाले मात्र उनीहरूको पीडा कम हुन्छ । तर प्रायः पीडितले समाजको साथ पाउँदैनन् ।
पीडितलाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म उसले सामाजिक न्यायको अनुभूति पनि गर्न सक्दैन । यस्ता कतिपय घटनालाई परिवार, समाजमै दबाइन्छ, मिलाइन्छ । मुद्दा चलाए पनि फैसला चाँडै हुँदैन । फैसला भएर पीडक जेलमा पुगे पनि पीडितलाई समाजले स्वीकार गर्दैन ।’
प्रदेश २ प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा यस प्रदेशका आठ जिल्लामा एक सय ७० वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै २०७५-०७६ मा दुई सय ९६ र २०७६-०७७ मा दुई सय ८५ वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका छन् । चालु आव २०७७-०७८ को हालसम्म ७६ वटा बालात्कार मुद्दा दर्ता भएको तथ्यांक प्रहरीसँग छ । त्रिवर्षीय तथ्यांक केलाउँदा सबैभन्दा बढी बलात्कारका घटना साउन र भदौमा भएको देखिन्छ ।
प्रदेश २ प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाईले अधिक बलात्कारका घटना चिनजानकै मानिसबाट भएको बताए । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुँदा पनि बालात्कारका घटना बढेको अध्ययनले देखाएको छ । बलात्कृतमध्ये करिब ६० प्रतिशत २० देखि २५ वर्ष उमेरमुनिका छन् । त्यसमा पनि ११ देखि १५ वर्ष उमेरबीचका धेरै छन् । बलात्कृत हुनेमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, निमुखा र दलित समुदायका बढी छन् ।